19 / 05 / 2021 19 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1163 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါ Benatar, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black က Panther, Captain America, Groot, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, mantissa, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021, Thanos, Thor
အဆိုပါ Lego Marvel Infinity Saga မော်ဒယ်များကိုတရား ၀ င်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးတည်ဆောက်သူများအနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အများအပြားတရားဝင်ပြီးနောက်ကျေးဇူးတင်စကားထုတ်ဖော်ပြသပြီးနောက် အွန်လိုင်း နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏နွေရာသီလှိုင်းအပြည့်အဝအသေးစိတ်ကို Lego Marvel အစုံထင်ရှားပါပြီ။ အကယ်၍ သင်မကြားဖူးပါကနောက်ဆုံးပေါ်အကွာအဝေးသည်ယခင် Avengers: Endgame, Avengers: Age of Ultron နှင့် Iron Man စသည့်ရုပ်ရှင်များမှအချိန်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
ထိုအားလုံး Lego Marvel အပါအဝင် Infinity Saga အစုံ ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားအတွက်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သော်လည်းအမေရိကန်ဆောက်လုပ်သူများသည်သြဂုတ် ၁ ရက်အထိစောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet ယခုအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com တွင်ကြိုတင်မှာယူပါသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူ Zavvi မှ.
အောက်ပါအစုံသည်အခြားသောအခင်းအကျင်းများမှတည်ဆောက်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူမကြာမီစတင်မည် Minecraft, Disneyနှင့်ပထမ Speed Champions 2021 အစုံ:
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 202 အသေးစားပုံများ: Black က Panther, Shuri, Chitauri
စျေးနှုန်း: £ 8.99 / $ 9.99 / € 9.99 အပိုင်းပိုင်း: 49 အသေးစားပုံများ: Captain America, Hydra အေးဂျင့်
စျေးနှုန်း: £ 34.99 / $ 39.99 / € 39.99 အပိုင်းပိုင်း: 479 အသေးစားပုံများ: သံက Man, ငရုတ်ကောင်း, Obadiah Stane
စျေးနှုန်း: £ 79.99 / $ 69.99 / € 89.99 အပိုင်းပိုင်း: 527 အသေးစားပုံများ: Captain America, Thor, Iron Man, Black Panther, Scarlet Witch, Chitauri, Thanos (bigfig), Ant-Man (nanofig)
စျေးနှုန်း: £ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,901 အသေးစားပုံများ: Star-Lord၊ Rocket Raccoon, Groot, Thor, Mantis, Chitauri
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Marvel Infinity Saga သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုသည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO အုတ်၏လျှို့ဝှက်ဘဝသည်မည်မျှဝေးသနည်း။
LEGO သည်၎င်း၏ PickaBrick အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံများစွာသို့ချဲ့ထွင်လျက်ရှိသည် →